ESAT Afaan Oromo – Page 71 – ESAT Afaan Oromo
Baqattoonni Lammiilee Itoophiyaa biyya Siwidiin jiraatan kanneen xalayaa heeraa hin argatin mootummaan Swidiin biyyatti akka galchuuf yaadaa jirtu barame
Baqattoonni Lammiilee Itoophiyaa biyya Siwidiin jiraatan akkauma biyya Noorwaayitti baqattoonni xalayaa hayyamaa hin argatin baatii Adooleysaa irraa eegalanii akka biyyatti deebifamuuf mootummaan yaadaa jirtu dura táan baqattootaa Obboo Efreem Akliiluu ibseeti jira. Mootummaan Itoophiyaa namoota baqattoota tikaaf qoratan biyya alaatti erguun hiree baqataa balleeysuun baqattoota dhugaan rakkatanii biyyrraa bahan dura akka xalayaa heeraa argatan barame. Haala kana mormuuf baqattoonni guyyaa ...
Obboo Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaa shoorarkummaan himatame.
Mormii oromiyaa keessatti sadaasa eegalame sababa gochuun kan hidhame miseensi paartii samaayaawii obboo Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaa yaada fii ilaalcha isaa waan sabaahimoota gara garaa irratti barreesseef shoorarkeeysummaan mana murtiitti yakkaan himatame. Obboo Yoonaataan miidiyaalee sab -qunnamtii gara garaa irratti barruulee ummata mormiif kakaasan facaasuun yaada mootummaa qeequ barreesse jechuun abbaan halangaa mana murtii tti himannaa itti dhiheesse ture. Yoonaataan nama ...
Daldaltoonni magaalaa Dasee mormii hujii dhaabuu guyyaa lamaaf taasisan.
Bakka bu’aan ESAT kan naannoo akka nuuf gabaasetti guyyoota Caamsaa 2 fii 3 guutumatti galmi daldalaa magalaa Dasee cufameeti jira. Guyyaa Roobii manneen daldalaa hagi tokko banamuu jalqabeeti ture. .Manneen dukkaanaa galma salaam tti dukkaanni 624 galma glana guddinaa dukkaanota 638 galma Laakomzaa tti dukkaanota 632 akkasuma galma miliiniyam tti dukkaanonni 562 cufamaniiti ooluunii guyyaa Roobii kalee hangi tokko hujii ...
Itopphiyaa keeysatti Balaan Tiraafiqaa harka dhibbarraa kudha tokko dabaltaa jiraachuun barame.
Namooni baatiilee saglan barbe balaa konkolaataatiin ajjeefaman kan bara dabreetiin waliin yoggaa madaalamu 11% dabalamuun namoonni 5000 tti herregaman miidhhaa cimtuuf saaxilamuu itti gaafatamaan nagaya tiraafiqaa obboo simee balaay beeysisan. Ajjeechaa lubbuu namarra geessee fii qabeeny miliyoona 569 baatiilee saglan tana keessa waan dhabamaniif jecha haalli tiraafiqa biyyattii hedduu akka yaaddessaa tahe obboo sammuun ibsan. Heddomminii konkolaatota biyyaa heddommina lammii ...
Ijoolleen bulchinsa Gaambeellaa keessaa butamanii fuudhataman 125 keessaa 32 argamuun isaanii barame.
Hidhattoota gosa Murlee tiin torbee lama dura gaafa Ebla 14 2016 tti ijoolleen 125 tan bulchinsa naannoo Gaambeellaatii butamanii fudhatamanii turan keessaa 32 argamuu isaanii hoogganoonni biyya Kibba Suudaanii hubachiisan. Gaazeexaan Asosheetid Piras obboo Ogaatoo Chaan bulchaa godinaa Boomaa akeekuun hoogganoonni gosaa; ijoollota gandeen sadii kan aanaa Liku aangoolee keessa akka qubachiisan gabaasan. ijoollonni argaman dura magaalaa gudditti Piiboor tti ...
Himannaan Shororkeessummaa Baqqalaa Garbaa fi Namoota Biroo Oromiyaa Keessaa Irratti Dhihaate Ameerikaanna yaaddesse jetti
Mootummaan Itiyoophiyaa dhiheenya kana shororkeessummaa Itti-aanaa dura-taa’aa duraa, Koongiresii Dimookiraatawa Oromoo – Obbo Baqqalaa Garbaa fi kanneen biroo Oromiyaa keessaa irratti dhiheessuun isaa akka isa yaaddesse kan dubbate ibsi Ministrii Dhimma-alaa Ameerikaa, Sanbata dheengaddaa ifatti baastee jirti. Mootummaan Itiyoophiyaa seera farra-shororkeessummaa irratti hundaa’ee, gaazzexeessota, miseensota paartii siyaasaa fi qabsaa’ota himachuu akka dhaabu kan gaafate ibsi Mootummaa Ameerikaa kun, “sababni isaa ...
Hongee Ethiopia mudateen harka caalu kan miidhaman ijoolleedha
Itiyoopiyaan waggoota hedduu keessatti hongee hamaatu ishee mudate. Kanneen hanqina nyaataan irra caalaa miidhamanis ijoollee yemmuu ta’an dhukkubaafis isaan saaxilee manabarnootaa irraa hanqachuu danda,an. matahaaraa bakka lammiiwwan biyattii irra guddaan gargaarsa namoomaa barbaadan irraa marthe van der wolf gabaastee jirti. Hongee yeroo ammaa jiru irraan kan ka’e lammiiwwan Itiyoopiyaa miliyoona kudhanii ol ta’an gargaarsa midhaan nyaataa kan yeroo hatattamaa eeggataa ...
Mumichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dasaleny boqonnaa fi waldhaansaaf Jarman galuun isaa beekame.
Mumichi Ministeeraa Hayilamaariyaam guyyoota muraasa dura xiyyaara dhuunfaa “Charter” jedhamu kireeffachuun magaalaa Jarman Badaan jedhamutti maatii isaaniitiin simatamuun galaniiru. Obbo Hayilamaariyaam yeroo Boqonnaa isaanii kan dabarsan mana yeroo boqonnaaf jedhanii magaalaa Jarmanitti bitatan keessatti ta’uu akka danda’u maddeen keenya himaaniru. Yeroo turtii isaanii kana keessatti miidhagina ija isaaniitiif yaala fayyaa baqaqsanii hodhuu hojjechiifachuun isaanii akka hin hafnes himameera. Yeroo uummatni ...
Komishiniin mirga dhala namummaa Itoophiyaa mormii uummataa Oromiyaa paarlaamaaf dhiheessuu hin dandeenye.
Miseensa wayyaanee akka ta’an kan himamu Dr. Addisuu G/gebrezaabiheerin kan gaggeefamu komishiiniin mirga dhala namummaa Itoophiyaa mormii Oromiyaatti uumame ajjeechaa lubbuu fi dhiittaa mirga namummaa adda baafatus paarlaamaatti dhiheessuu akka hin dandeenye beekame. Komishiner Addisuun jalqaba ji’a Bitootessa darbe irraa kaasee torbee lama gidduutti gabaasa paarlaamaaf akka dhiheessan qophii irra jiraachuu dhaabbilee sab- quunnamtii biyya keessaatti himaa turanis , torban ...
Dubbataan waajjiraa damee dhimma alaa biyya yuunaaytid isteets Joon kirbiin haala himannaa shoorarkeessummaa mana heeraa itoophiyaa hoggantoota jaarmaya siyaasaa irratti dhihaate irratti ibsa kaleessa Ebla 29 tti kennan.
Himannaa shoorarkeessummaa tan Mootummaan Itoophiyaa obboo Baqqalaa Garbaa itti aanaa dura taa’aa lammaffaa KFO fii namoota sababaa mormii Oromiyaa tiin ji’a Sadaasa 2015 irraa eegalanii hidhamaa jiran mootummaa Yuunaaytid steets haalaan yaaddeysaa tahuu joon Kirbiin dubbataan waajjiraa damee dhimma alaa biyya Yuunaaytid steets guyyaa Jimmata kaleessaa ibsa kennan. Mootummaan Itoophiyaa sirna Dimokraasii dagaagsuu dhiiftee heera shoorarkeessummaa adabuu kan baafatte irratti ...